E-News Nepali || Fast and Accuracy » दुई महिनाको छोरालाई कलेजो दिएर बचाउने महेश ‘छोरालाई जीवन दिएँ, अब भविश्य दिनुछ’
फागुन, काठमाडौं । विवाह गरेको चार वर्षसम्म महेशप्रसाद र गीता अवस्थीले सन्तान जन्माएनन् । यसबीचमा समाज र आफन्तहरु उनीहरुलाई प्रश्न गर्थे– बच्चा कहिले ?
तर गीताले सन्तानलाई संसार देखाउन आफ्नो पेट चिर्नुपर्ने भयो । २४ असोज, २०७६ मा शल्यक्रियामार्फत गीताले छोरा जन्माइन् । ‘पाँच वर्षको प्रतिक्षापछि छोरालाई समाउँदा यति खुशी भएको थिएँ कि त्यसलाई शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिनँ’, महेश सम्झिएरै दंग पर्छन् । शिशु जन्मिएपछि हस्पिटलले भन्यो, ‘बच्चामा सोडियमको मात्रा थोरै कमी छ । एक दिन मेन्टेन गरे पुग्छ ।
अर्को दिन हेर्दा शिवान्सको पेट भुक्क फुलेको थियो । एकाविहानै महेश र गीताले छोरालाई कान्ति बाल अस्पताल पुर्‍याए । डाक्टरले आकस्मिक कक्षमा राखेर शिवान्सलाई औषधी र सुइ दिए । दुई घण्टापछि अस्पतालले भन्यो, ‘बच्चाको अवस्था अलि जटिल भएकाले एनआईसीयूमा राख्नुपर्छ । तर हामीकहाँ बेड खाली छैन ।
छोराको रुवाइ रोकिएकै थिएन । बाबुआमालाई सकस भयो । महेशले अनुनय गरे, ‘सरकारी अस्पताल भनेर विश्वास गरेर आएको, कृपया मिलाइ दिनु न ? यति सानो बच्चा बोकेर कहाँ–कहाँ धाउने ?
तर फेरि बेचैनी शुरु भयो । शल्यक्रिया गरी सन्तान जन्माएकी गीताले छोरालाई छातीमा सुताउने धोका पूरा नहुँदै अस्पतालको भुइँमा सुत्नु परेको थियो । डाक्टर त भन्दैथिए, ‘हामी हेर्दै छौँ, आत्तिनु पर्दैन ।
महेशको सकस बढ्दै गयो । छोराको चिन्तासँगै सुत्केरी पत्नीलाई पनि सम्हाल्नु थियो । ‘गीताको अवस्था यस्तो भएको थियो कि केही पनि सम्झिन छाडिसकेकी थिइन् । मात्र रोइरहन्थिन्’, महेश आँशु लुकाउँदै बोल्छन्, ‘म आफैं पनि सम्हालिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थिएँ ।
महेश दिनमै कैयौँ पटक डाक्टरलाई सोध्न पुग्थे, ‘डाक्टर सा’ब के भएको हो मेरो बावुलाई ?’ डाक्टरले रेडिमेड उत्तर मात्र दिन्थे, ‘नर्मल छ । इन्भेस्टिगेसन गर्दैछौं । केही हुन्छ कि भनेर कोशिस गरिरहेका छौं । त्यस्तो केही भयो भने भन्छौं ।
प्रकाशित मिति २० फाल्गुन २०७६, मंगलवार ०४:३४
खुशीको खबर विनोद चाैधरीले आईसीयू वार्ड र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न १० करोड रुपैयाँ सहयोग [ सम्मान स्वरुप १ – १ सेयर गरौ]
को’रोना संक्रमितलाई अक्सिजन किन्न राजारामले दिए एक लाख सहयोग [सम्मान स्वरूप १ सेयर गरौ]
सरकारी अस्पतालका लागि बिल बनाएर ठिक्क पारेका अक्सिजन सिलिण्डर ३ दिन देखि खुसु-खुसु नीजिमा पुगेपछि
सांसद चौधरीले लमही र सिसहनिया अस्पतालमा पठाइन स्वास्थ्य सामग्री
नेपाल आइपुग्यो चीन सरकारबाट अनुदानमा पाएको १८ हजार अक्सिजनका सिलिन्डर
कोरना हस्पिटलमा कार्यरत २० वर्षकि नर्सको कोरना लागेर मृत्यु हार्दिक श्रन्धान्जली । हेर्नुस्